Cities Best EYurophu bethenga ngololiwe | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Cities Best EYurophu bethenga ngololiwe
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 20/11/2020)
namava amatsha i intshukumisa kakhulu kokuhamba. kunjalo, ngamanye amaxesha emehlweni kubakhenkethi-friendly azilubambi ikhandlela ukuya esibi lokuthenga, kungakhathaliseki yeka. Abantu abatyelela bethenga kwazi oku, kwaye kukho ngethamsanqa inala izixeko eYurophu apho kungaba yilo zawo imali.
kunjalo, ukuba imali engaphezulu namandla washiywa bethenga, ukuba luluvo olulungileyo ukuhamba cheap kodwa fast. Ukufumana emizini kakhulu eYurophu sithenga ngololiwe uzalisekisa zombini ezo meko. Makhe jonga ezinye zawo ezingqongileyo zokuthenga ezinkulu nendlela ungafumana khona ngololiwe:
Ukuthenga e Amsterdam, elamaDatshi
Amsterdam yaziwa izinto ezininzi, kunye namaziko alo lokuthenga ungowakubo. Esi sixeko inika uluhlu olubanzi lwemisebenzi zokuthenga kunye brand, kuxhomekeke ezinkulu ngayo imali yakho. Ukuba ukhangela ezithile zokuthenga ukunyusa, i P.C. Hoofstraat ke esitratweni kuwe. Kuba kwiivenkile kwisebe kunye namaziko zokuthenga, u nga hit De Bijenkorf, Magna Plaza okanye Kalvertoren.
De Negen Straatjes okanye Streets Nine nabo olukhulu abathengi ukuba ufuna ukuba iivenkile ezininzi ezahlukeneyo nezimbo kwaoko. Ungakwazi ukufikelela Amsterdam ngololiwe ngokulula ezininzi kwizixeko ezinkulu yaseYurophu, kuquka eParis no Copenhagen.
Ukuthenga eMilan, Italy is our Fashion pick for Best Cities in Europe for Shopping
IMilan ibalwa phakathi kwezona zixeko zibalaseleyo eYurophu ngokuthenga ngenxa yokuqwalaselwa njengedolophu enkulu yefashoni. kunjalo, Milan akukho nje malunga the Fashion kunye fashion eliphezulu-ezitratweni kule ndawo Duomo. Kukho ezinye iindawo ezininzi ukuhlola, ukusuka kwiivenkile zobugcisa zesithili saseBrera ukuya kwiimpembelelo zobumnandi kwindawo yaseNavigli. Milan Eneneni yiparadesi umthengi lowo. Ukuba nomdla kuyo, ungakwazi ukuya Milan ngokulula ngololiwe ukusuka eRoma, Venice, kwakunye neminye imizi eYurophu.
abathengi abanamava ukuthanda Zurich, ingakumbi abo banako ukwenza ezona yeevenkile yayo kuyabiza. Zurich yenye yezixeko best eYurophu ezivenkileni kuba uziva eyahlukileyo kunokuba kulawulo ezininzi. ungenguye Sihlcity Shopping Centre kunye shopping mall Glatt eevenkile shopping enkulu na ukuba mhlawumbi ukuze, kodwa benza idini ithengisa esemgangathweni amava.
Ezinye iindawo ziquka i Bahnhofstrasse, Europaallee, kunye nakwiindawo ezikufutshane Langstrasse, ingakumbi xa ufuna hlola Swiss kunye noyilo lwedolophu. Ukufumana apho ngololiwe kulula ukusuka Berlin, eMunich, Vienna, kunye nezinye izixeko ezikhulu zaseYurophu.
EGeneva ku Zurich Trains
Berlin, Germany naye phakathi Best Cities eYurophu Shopping
Berlin Mathews isihloko kwesinye sezixeko eziphambili eYurophu ethenga kwizithili zalo ezinkulu ezithengisayo apho ningawufumana phantse yonke into. Kuba abo ipokotho enzulu, Kurfurstendamm okanye "Ku'damm" kukho unxibelelwano-utyelelo, ngelixa abo mali ezingqongqo uzoba sibe uhambo i Tauentzienstrase. Ngenxa ethandwayo indawo yaseYurophu nomzi enkulu, Berlin kulula onokulufikelela ngololiwe kwezinye izixeko ezininzi eYurophu.
Enye yezinto ezenza Antwerp unique shopping-osisilumko yesithili diamond edumileyo. kunjalo, Antwerp doesn’t lack designer and iivenkile evumile, Iivenkile antique okanye simaxhaphetshu iimarike mhlawumbi. Ingaba amava ekhethekileyo bonke abathengi, nkqu nalawo nzima ukumkholisa. Ungakwazi ukufikelela Antwerp ngololiwe e Berlin, Paris, kunye neminye imizi eYurophu.
Ulungele shopping inguthile omkhulu kwezinye izixeko best eYurophu? Cwangcisa uhambo lwakho, yaye incwadi amatikiti etreyini yakho ekuqaleni!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-europe-shopping-train%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, kwaye ungatshintsha indlela / kwi / de okanye / ru kwiilwimi ezininzi.
#traveleurope europetravel shopping oololiwe
5 Most Beautiful Imilambo EYurophu Ukuze Hlola
Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Train Travel Holland, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe eSwitzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe